Blockchain News 10 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 10, 2018 Admin
Blockchain News 10 Janoary 2018
Metatron mamoaka cryptocurrency sehatra raharaham-barotra
Metatron, ny teknolojia mpisava lalana manokana tany amin'ny famoahana haingana ny 2000 Apps dia faly manambara ny famotsorana an'i BitMeet ™, ny raharaham-barotra cryptocurrency amin'ny vidiny sehatra fanaraha-maso sy ny toerana misy asa Google Play izao.
Bitmeet ™ 's endri-javatra tafiditra amin'ny chat, toerana ny mpampiasa, izay te-hividy sy hivarotra cryptocurrency, Pricing, tsena Cap, ny vaovao farany ary ny maro hafa. Azo jerena ao amin'ny Google Play izao, dia manantena fa mba ho afaka ny iOS ny hevitra ao amin'ny hoavy tsy ho ela.
"Ny sehatra cryptocurrency ™ Bitmeet dia hanampy hanafaka ny vahoaka amin'ny rojo vy ny banky foibe Fiat, famoronana vaovao akaiky taranaka ny mpanjifa sy ny firongatry ny tsena renivohitra tena mifototra amin'ny sehatra filalaovana,"Hoy Joe Metatron Tale Jeneralin'ny Riehl.
Direxion, ProShares, VanEck hiala Bitcoin ETF filings
Direxion, ProShares sy VanEck teo vitsivitsy ETF issuers izay misintona filings ny hanomboka bitcoin ETFs noho ny fangatahan 'U.S. dalàna.
Ao amin'ny iray mifandraika naoty, Ny SEC dia mitady torohevitra ao amin'ny tolo-kevitra fitsipika fanovana ny Chicago Board Options Exchange (CBOE) izay mety hamela ny fifanakalozana ny lisitra hatramin'ny efatra bitcoin ETFs. Cboe no voalohany fifanakalozana mpandraharaha ao amin'ny U.S. mba hampidirana hoavy miorina amin'ny nomerika vola, rehefa nanao izany tamin'ny volana lasa.
hatreto aloha, tsy misy fifanakalozana varotra entana mifandraika amin'ny vola nomerika no ankatoavin'ny U.S. dalàna.
Goldman Sachs: In-kevitra Bitcoin dia mety ho ara-dalàna ny vola teny
Bitcoin afaka ny ho ara-drariny sy fielezan'ny endriky ny vola, fa indrindra amin'ny teoria, amin'izao fotoana izao, araka ny Goldman Sachs tetikady.
“Ny miely patrana ny fampiasana dolara ivelan'ny Etazonia - sy feno any amin'ny firenena sasany dollarization - manoro hevitra dia efa misy mangataka ho mpanelanelana iraisam-pirenena nanaiky ny fifanakalozana sy ny fitehirizana ny zava-dehibe,” hoy i Goldman Pandl Zach sy Charles Himmelberg amin'ny taratasy kely tamin'ny Alarobia.
Amin'izany firenena sy joron-rafitra ara-bola misy ny asa nentim-paharazana ny vola no nanome inadequately, bitcoin (ary cryptocurrencies amin'ny ankapobeny) Mety manolotra safidy azo iainana.
Ohatra, bitcoin fifanakalozana boky nifanosika tao Shina taorian'ny clamping amin'ny firenena nanomboka teo amin'ny renivohitra outflows in 2016.
Amin'izany heviny, misy fangatahana ho bitcoin ho toy ny endriky ny vola hanaovana varotra. Fa izay tafiditra ao ny vola portfolio-, cryptocurrencies dia “mifanaraka kokoa amin'ny mahazatra tombantombana fefy,” Hoy ny tetikady. Izy ireo nanamarika fa Korea sy Japana hanjaka bitcoin fifanakalozana boky, fa ireo firenena ihany koa amin'ny vola miovaova ny rafitra.
Ny zava-misy dia ny hoe cryptocurrencies mbola manana fitsipika avo fisotroana hanadio any amin'ny ankamaroan'ny toerana, Hoy ny tetikady. Ny manomboka amin'ny, governemanta dia tsy afaka manara-maso na iza no mandoa ny fandraisana vola nomerika.
Goldman Sachs dia voalaza fa manomana latabatra cryptocurrency varotra.
Maduro ny menaka notohanan'ny cryptocurrency nolavin'ny Venezoela ny Parlemanta
Venezoela mpanohitra-mihazakazaka antenimiera tamin'ny Talata voarara ny "Petro" cryptocurrency nasandratry ny Filoha Nicolas Maduro sosialista, nantsoiny hoe ezaka tsy ara-dalàna ny vola antoka-menaka teo amin'ny fehikibony firenena tahirin.
Maduro ny Zoma hoy ny governemanta fa hamoaka efa ho $6 lavitrisa ny Petros ho fomba hanangana mafy vola sy ny sazy ara-bola tratran'ny napetraky ny Washington.
Cryptocurrency manam-pahaizana milaza ny tsy fahaiza-mitantana Venezoela ny Toe-karena ny tenany, mitambatra ny didim-pitsarana manan-tantara Antoko Sosialista ny tsy fisian'ny fanajana ny zon'ny fananana manokana, dia azo inoana fa hamela mpampiasa vola tsy liana amin'ny mahazo Petros.
"Tsy misy cryptocurrency, izany dia nandroso fivarotana ny menaka Venezoeliana,"Hoy ny mpanao lalàna Jorge Millan. "Ny Tailor-natao ho ny kolikoly."
Maduro no zatra tsy niraharaha ny mpanao lalàna satria ny antokony fanaraha-maso intsony izany amin'ny 2016, sy ny mpomba ny governemanta Fitsarana Tampony no voatifitra teo saika lasa hatramin'ny fepetra rehetra dia.
Maduro manantena izany dia ho toy ny rafitra fandoavam-bola ho an'ny mpamatsy vahiny sy ny fandoavam-bola tsy fahatarana izay nitombo kokoa ny sazy Matsilo satria niditra tao an-toerana.
Trat Fund ny Tom Lee: Bitcoin afaka mora foana ao avo roa heny 2018
Ny iray amin'ireo lehibe indrindra Wall Street bitcoin omby, hoy ny cryptocurrency afaka “mora avo roa heny” na telo amin'ny 2018.
“Na amin'ny mety-nanitsy fototra, Mino aho fa bitcoin dia handeha mora foana outperform ny S&P,” Lee hoy ny Talata tamin'ny CNBC “Hoavy izao.” “Eo amin'ny fototra maharitra, ny fomba tsotra indrindra mijery bitcoin dia toy ny fanoloana na fivarotana-danja,” hoy izy. “Millennials mba hahita ary hiteraka fidiram-bola, ry zareo handeha hampiasa azy io ho toy ny fanoloana ny volamena.”
“Raha mahazo bitcoin 5 isan-jato ny volamena tsena, izany mitovitovy $ 50.000,” dia nandroso. Izany dia mihoatra noho ny 200 fihetsika isan-jato avy amin'ny toerana amin'izao fotoana izao bitcoin varotra.
Ao amin'ny iray akaiky-teny fototra, Lee manantena bitcoin mba hitaky ny Desambra avo. “Heverinay fa amin'ny tapaky ny 2018, isika dia handeha ho anisan'ny-dalana ho any, ary izany no mahatonga antsika mahazo [bitcoin ny $20,000],” hoy izy. “Raha ny marina dia afaka hitsangana bitcoin akaiky izany $20,000 ambaratonga ao amin'ny tapany voalohany amin'ity taona ity, Mino aho fa ao amin'ny tapany faharoa ny 2018, ho hitantsika ny hetsika lehibe kokoa noho izany,” Lee hoe:. “Ary mihevitra aho fa bitcoin dia mbola manana zavatra tokony taona rehetra.”
Ny zava-dehibe dia manana ripple ...
Manam-pahefana Koreana F ...
Previous Post:Iza no nanao ny anjara lehibe indrindra ho an'ny orinasa crypto? Top 7
Next Post:Blockchain News 11 Janoary 2018